Indawo yeWorship News yeWebhusayithi enezibuyekezo ezizayo zeHorror Movie Trailer
Iindaba zeHoror Movie
by UJon Pharr Novemba 1, 2020
USteve Martin kunye noMartin UkuBuyisa okuFutshane 'KkuBubulali kuphela kwiSakhiwo' kwiXesha lesi-2 leTeaser
ISPIDERHEAD Trailer ibonisa uChris Hemsworth eNtuthukisa ngokwengqondo izifundo zakhe
Ngamana 17, 2022
Ubundlobongela baseTightwad ngolwe-Lwesibini-Iifilimu zasimahla ze5-17-2022
Iindaba ezothusayo zoLonwaboUdliwanondlebe (bhanyabhanya)bhanya
'Iintliziyo ezikrazukileyo' uMlawuli weSibonelelo seBrea kuMlo wamanqindi kunye noBudlelwane baseMazantsi
'I-Predator' Prequel 'Ixhoba' Lifumana Itreyila Yexesha Lokuqala
I-BLACK IMIRROR iBuyisela iXesha elitsha kwiNetflix
Inqwelwana 'yovuko' yiNgqondo yengqondo kunye noMbane
'I-Andy Baker Tape:' 'Cwaba,' Kodwa Yenze iDiners, i-Drive-ins kunye ne-Dives
Igama lakhe yayinguJason kwaye kule mpelaveki iNgqokelela 'yoLwesihlanu we-13' ziidola ezili-13 zeedola.
Khangela Iindidi Ozithandayo ezoyikekayo
IZINDABA ZOKUTSHATYANA ZOBUHLUNGU
by UTrey Hilburn III Ngamana 18, 2022
Ngubani owayenokucinga ukuba uSteve Martin noMartin Mfutshane baya kubuyela kunye kwiHulu? Ngaphaya koko, ngubani owayenokucinga ukuba abahlekisi babini bakudala bangayenza loo nto ...
by U-Anthony Pernicka Ngamana 17, 2022
Itreyila yeNetflix ezayo ye-sci-fi i-Spiderhead isanda kukhululwa kwaye kubonakala ngathi izakuba luhambo olumnandi lokugoba ingqondo. Itreyila ibonisa isimilo sikaChris Hemsworth esonwabela kakubi…
by UJames Jay Edwards Ngamana 17, 2022
Hey Tightwads! KungoLwesibini kwakhona, kwaye oko kuthetha iimuvi zasimahla kwi-iHorror! Kwaye apha…
by UKelly McNeely Ngamana 17, 2022
Umdla kaBrea Grant uyosulela. Unothando olunjalo kuhlobo kunye nothando lokwenza ifilimu, zonke zabelwana ngepositivity eqaqambileyo nekhuthazayo. Ingaba uyabandakanyeka njenge...
by UTrey Hilburn III Ngamana 16, 2022
Asizange sicinge ukuba ipistol eyanikwa uDanny Glover ekupheleni kwePredator 2 yayingasoze iye ndawo, kodwa silapha. Imihla…
by U-Anthony Pernicka Ngamana 16, 2022
Iindidi ezahlukeneyo ziqinisekisile ukuba ixesha elitsha le-Black Mirror lisebenza kwiNetflix. Sele iyiminyaka emi-3 inqumama ukusukela kwisizini yokugqibela yeBlack Mirror…
by UTrey Hilburn III Ngamana 14, 2022
I-Rebecca Hall ikwi-roll yezengqondo kunye neefilimu ezoyikisayo. Ifilimu yakhe yamva nje, i-Night House yenye ethumele ukungcangcazela kumqolo ngoku, ubuyele…
by UBrianna Spieldenner Ngamana 14, 2022
I-Andy Baker Tape, imuvi entsha efunyenweyo eyothusayo, yavula umnyhadala ongachazwanga ngegama lomnyhadala weeyure ezili-12, kwaye yadibanisa izinto ezinejusi zePatrick Brice's Creep kunye ne-twist ekhethekileyo ...
by UTrey Hilburn III Ngamana 13, 2022
UHLAZIYO: Kuyavela ukuba iMicrosoft yenze kuphela i-13 yeedola ngosuku lokuqala lwempelaveki. Kwimpelaveki eshiyekileyo, isiqingatha sekhefu, siyenza i-$24 ukusuka…
Umdlali we-Tremors uFred Ward usweleke eneminyaka engama-79
by U-Anthony Pernicka Ngamana 13, 2022
UFred Ward, umdlali weqonga owaziwayo owadlala kwi-Tremors, The Right Stuff, The Crow: Salvation, uswelekile. Ummeli wenkwenkwezi ethi "Exit Speed" uqinisekisile ukuba ubhubhe okokugqibela ...
Cofa Apha Ukudlala
I-Nightmares kaFreddy ngoku ikhululekile ngokupheleleyo ukuba isasaze zonke iziqendu ezingama-44
URob Zombie wabelana ngeefoto ezimbalwa zikaHerman, uLily kunye noTat'omkhulu kuMfanekiso oMbala omangalisayo.
Ubungakanani boBomi uJason Voorhees ebotshelelwe emazantsi e-AZ Lake
Uphononongo lweMovie eyoyikekayo: Abamsulwa
Ngamana 7, 2022
'Neptune Frost': Ibali le-Cyberpunk Anti-Capitalist Queer Love
'I-Nitram': Umfanekiso we-Aussie serial Killer
Inkcazo yoMnyhadala weFootage engachazwanga: Eyona nto igqwesileyo yeFest
"Isiporho" sibanjwe kwiCCTV sityhala ngaphezulu kweBeer eLungileyo
Imidlalo yeParanormal: Umnyango oBomvu, uMnyango oMthubi
Imidlalo yeParanormal: Isiko lesiKumkani esiThathu
Isiporho sijikisa oomatshini bokuhlamba abanzima ngokupheleleyo kwiVidiyo yeViral
IIMBONISO ZEfilim ezoyikisayo!
Wonke umntu uyazithanda iitreyila! Gcina usexesheni ngemiboniso bhanyabhanya eyothusayo yamva nje nebalaseleyo! Ukusuka kwimiboniso bhanyabhanya eyothusayo ukuya kwimiboniso bhanyabhanya eyoyikisayo, sikugubungele!
BONGELA ZONKE AMATHREYILE Emovie
USteve Martin kunye noMartin babuyela ixesha elifutshane 'kwizigebenga kuphela kwiSakhiwo'...
Ngamana 18, 2022 0 izimvo
'Irhamncwa Liza Ezinzulwini Zobusuku': Sithetha Iingcuka zaseDolophini encinci kunye noMlawuli
by UBrianna Spieldenner Ngamana 13, 2022
'UMqokeleli' uMlawuli uMarcus Dunstan wenza uhlaselo lweMichiza iGorefest yeBlumhouse 'Engenabuntu'